Sivanin’ny Tranobem-Pirenena Ho an’ny Siansa ao Etazonia ny GV Advocacy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Avrily 2011 12:35 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, English
Tsy ela akory izao, ny ekipan'ny Global Voices dia naheno fa ny vohikalany, https://advocacy.globalvoicesonline.org, dia voasakana ao amin'ny foiben-toeran'ny Tranobem-Pirenena Ho an'ny Siansa – National Science Foundation (NSF) ao Washington, D.C. Raha ny fomba fanao mahazatra ireo orinasa sy fikambanana maro, dia mampiasa rindrambaiko fanivanana ny NSF mba hanakanana vohikala maromaro. Ny sivana tahaka izany matetika dia mikendry ny hanakanana ireo vohikalam-betaveta sy misy votoaty tsy manaraka lalàna, nefa maro ireo orinasa no mandeha mihoatra lavitra noho izay fomba fanao izay.
Tamin'ity tranga ity, ny Tale Mpanatanteraky ny Global Voices Ivan Sigal dia nanoratra ho an'ny NSF mangata-panazavana momba ny fanakanana. Ity no valinteny azony:
Nandalo tamin'ny vaomiera mpanombana, ny ‘Blue Coat Review Commission’, ilay rohy URL ho fanasokajiana azy sy hanalàna ny sokajy “fandinganana Proxy ” izay nobahanana ary koa hanafoanana ny sokajy “Politika/hafanampo” izay tsy voasakana kosa hatrizao. Na izany aza, nolavin'ilay vaomiera ny fangatahana tamin'ny filazàny fa ilay vohikala dia miaty resa-poana tsy misy dikany manome ny fomba fandinganana ny sivana proxy, izay mazava loatra fa manosihosy ny politikam-piarovany ary noho izany dia mijanona ho voasakana foana ilay vohikala.
Farany, noho ny resaka fiarovana, ny NSF dia tsy mamoaka vaovao mikasika ny foto-drafitrasa misy ao aminy, ny fitaovana, ny rindran-damina, na politika na zavatra hafa an'ny Masoivohon'ny Governemanta Federaly hivoaka avy ao aminy raha tsy efa nahazoana alalana manokana avy tamin'ny Biraon'ny Fanarahamaso Ankapobeny sy/na ny Lehiben'ny Biraon'ny fampahalalam-baovao na izay solontenany ara-dalàna.
Amin'ny teny hafa, ny NSF dia mampiasa Blue Coat, rindrambaiko hita eny amin'ny tsenambarotra, mba hanakanana ireo proxy sy fitaovana hafa fandinganana sivana, hatramin'ny vohikala manondro na misy rohy mankany aminà proxy na fitaovana fandinganana sivana (izay ataon'io vohikala io rahateo).
Tahaka izay nasongadin'i Ethan Zuckerman, mpiara-namorona ny Global Voices ao anaty lahatsoratra iray ao amin'ny bilaoginy, sahala amin'ny zava-mahatsikaiky, indrindra fa fantatra hoe ny governemanta ao Etazonia (ary indrindra, ny Departemantam-Panjakana Misahana ny Demaokrasia, Zon'Olombelona ary ny Asa) dia mamatsy vola mivantana ireo teknolojia fandinganana sivana. Manampy i Zuckerman:
Tena mba zendana kely kosa aho naheno fa hoe miasa ao anaty tontolon'ny aterineto voasivana ireo mpahay siansa ao amin'ny NSF, ary io sivana io dia tena masiaka ka hatramin'ny firesahana momba ny sivana atao amin'ny aterineto sy ny fomba hialàna aminy aza tsy azo atao ao. Manontany tena ny tsirairay raha mety mba ho afaka manome fiofanana ho an'ny National Science Foundation ny Departemantam-Panjakana, amin'izay ireo mpiasa ao mba ho afaka mianatra miaraka amin'ireo Sinoa mitovy laharana aminy mikasika ny fomba hialàna amin'ny sivana ary hahafantatra mikasika ny fanohanan'ny Departemantam-Panjakana ny fikarohana momba ny sivana atao amin'ny aterineto. Angamba ho azontsika hatao ny hisisika ao amin'io tranobe io miaraka amin'ny Tor entina amin'ny USB ary antsokosoko no hanomezana azy an'ireo Amerikana mpikaroka momba ny siansa voageja ao.
Izahay ato amin'ny Global Voices dia te-hahafantatra hoe birao hafa iza koa ao amin'ny governamanta Amerikana no mbola mametraka sivana toy izany, ary karazana rindrambaiko toy inona no ampiasainy. Fantatray fa ny birao rehetra an'ny Radio Free Europe / Radio Liberty dia mampiasa ny Websense mba hanakanana ireo vohikala, nefa mbola misy hafa azonareo ambara aminay ve? Miangavy, mamela hafatra, ary raha afaka manao dikasarin'ny fafana aza ianao, alefaso aminay mba hitsidihanay ilay rohy.